December 2020 – Kalfadhi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay Sharciga Miisaaniyadda dowladda ee 2021 oo ay hore u soo ansixiyey Golaha Xukuumadda Federaalka, ayna meelmariyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka. Madaxweynaha ayaa boggaadiyey Xildhibaannada Golaha Shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aaddanaa Miisaaniyadda cusub ee dalka oo la kordhiyey, iyaga oo ku ansixiyey cod aqlabiyad leh. Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo khubarada dhaqaalaha Soomaaliyeed diyaarinta iyo jaangoynta miisaaniyad ka turjumeysa baahida ay qabaan shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo oo dul-istaagay…
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa maanta kamid ahaa mas’uuliyiintii salaadda janaasada ku tukaday, Alle ha u naxariistee, Wasiirkii hore ee Amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dawlad), oo aas qaran loogu sameeyey magaalada Garoowe. Guddoomiye Cabdirashiid ayaa aaska kaddib si gaar ah ugu tacsiyeeyay qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen Janaasada, isaga oo Alle uga baryey samir iyo iimaan, marxuumkana Jannatul Firdowsa hoygiisa ka yeello. Aaskan Qaran ee loo sameeyay Marxuum Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dawlad) waxaa kasoo qeyb galay Wasiiro ka tirsan…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Garowe
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka Mudane Hassan Sheikh Mohamud, ayaa maanta magaalada Garowe kula kulmay guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan. Labada mudane oo kamid ah martida sannadkan Garowe u joogta ka qeyb galka Madasha Aragti Wadaaga Heritage Institute ayaa ka wadda-hadlay xaaladda siyaasaddeed ee dalka iyo arimaha doorashooyinka ee taagan. Musharraxiinta doorashada ayaa aad uga soo horjeeda guddiga doorashada oo ay ku eedeynayaa in uu jiro dhinaca dowladda.
Golaha Sacabka oo dib-u-dhigay hindise-sharciyeedka hay’addaha aan dowliga ahayn ee NGO-yada
December 31, 2020 December 31, 2020 Hassan Istiila
Qoraal kasoo baxay xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay ka doodida hindise-sharciyeedka hay’addaha aan dowliga ahayn ee NGO-yada. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cawad Cabdalla, ayaa shir-guddoominayay kulankii shalay ee xildhibaannada. 20-kii bishii Julay ee sannadkan 2020, Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Calaamiga ah ee Soomaaliya, Amb Jamaal Maxamed Xasan, ayaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya horgeeyay, kaddibna u akhriyay sharciga hay’addaha aan dowliga aheyn. Golaha Shacabka ayaa dhinaca kale shalay akhrinta labaad marsiiyay hindise-sharciyeedka Qaxootiga, iyagoo sidoo kale ansixiyay saddex heshiis oo caalami…
Xildhibaannada Baarlamaanka oo akhrinta labaad marsiiyay hindise-sharciyeedka Qaxootiga
Guddomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cawad Cabdalla, ayaa shir-guddoominayay kulan shalay xildhibaannada ay akhrinta labaad ku mariyeen hindise-sharciyeedka Qaxootiga. Xildhibaan Maryan, oo Golaha Shacabka u akhrineysay hindise-sharciyeedka ayaa sheegay in sharciga uu salka ku hayo waajibaadyadii ka dhashay heshiiskii dowladda Soomaaliya ay ku saxiixday ka mid noqoshada heshiiska dadka magan-galya doonka ah ee Qaramada Midoobe. Xeerkan waxaa uu kamid yahay xeerarka ugu muhiimsan ee lagu dhowrayo xuquuql insaanka. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Guddoomiye Baarlamaanka oo caddeeyay in muddo-xileedka Baarlamaanka uu dhammaaday balse uu jiro qodob Dastuuri ah oo qeexaya…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo ka hadlayey madasha aragti wadaagga ee Heritage ayaa qeybta hore ee khudbadiisa kagag hadlay arrimaha doorashooyinka marka gaaro sannadkan 2025-ka. Mudane ayaa ugu horreyn carabka ku dhuftay in sannado badan ay ku qaadato doorasho Qof iyo Cod ah dhammaan waddamada nidaamkooda doorasho uu ku saleysanyahay Qof iyo Cod, isaga oo xusay in madaxda Qaranka iyo madaxda dawlad-gobolleedyada ay leeyihiin doorka ugu muhiimsan ee qabashada doorashada. Waxa uu xusay in 26-dii bishii September ee sanadkan Baarlamaanka Soomaaliya uu ansixyey heshiiskii siyaasadeed ee…
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ku baaqay in laga heshiiyo mabaadii’da ku saleysan Dastuurka
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadal ka jeediyay madasha aragti wadaaga Heritage ee Garowe, ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin dib-u-heshiisiinta, dhammeystirka dastuurka, dhismaha dowlad aan ku saleysneyn nidaamka qabaa’ilka iyo muhiimada midnimada ummadda Soomaaliyeed. Mudane Xaashi, ayaa sheegay in madasha lagu soo bandhigo waxkasta oo lagama maar-maan u ah horumarka iyo hannaanka doorashooyinka dalka. ”Waxaa lagama maarmaan ah in laga heshiiyo mabaadii’da Dastuurka sida 1-Nuuca Federaalka iyo awoodaha hey’adaha Federaalka, 2-Qubbaro in loo helo, 3-Miisaniyad Soomaaliyeed oo u gaar ah…
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay saddex heshiis oo caalami ah
December 30, 2020 December 30, 2020 Hassan Istiila
Guddomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cawad Cabdalla, ayaa maanta shir-guddoominayay fadhiga Baarlamaanka oo lagu ansixiyay saddex heshiis. Xildhibaannada ayaa si wadar-oggol ah ku ansixiyay saddexda heshiis ee kala ah :.. Heshiiska Qaramada Midoobay ee ladagaallanka Musuqmaasuqa Heshiiska Midowga Afrika ee ka hortaga iyo ladagaallanka Musuqmaasuqa. Heshiiska Carbeed ee ladagalanka Musuqmaasuqa. Mudane Mahad Cawad Cabdalla, ayaa aaminsan in heshiisyadan ay wax badan ka tari doonaan la dagaallanka musuqmaasuqa ee dalka, waxaana uu aad u ammaanay heshiisyada la ansixiyay. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka XFS Abdulkadir Mohamed…
Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta ansixiyay miisaaniyadda sanaadka 2021
December 30, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Baarlamanka Hirshabelle Dr. Cabdixakim Luqmaan Xaaji Muxumed, ayaa maanta shir-guddoominayay kalfadhiga 1-aad kulankiisa 12-aad oo ajandihiisa uu ahaa ansixinta miisaaniyadda sannadka 2021 ee dowlad-goboledka Hirshabelle. Wasiiru dowlaha wasaarada maaliyadda Xildhibaan Yusuf Macalin Hassan Jele, ayaa ugu horreyn xildhibaannada u akhriyey miisaaniyadda dowlad Goboledka Hirshabelle iyo qaabka loo qoondeeyay. Xildhibaannada Golaha Baarlamaaka Hirshabeelle ayaa ugu dambeyn cod gacan taag ah ku ansixiyey miisaaniyadda 2021, waxaana oggolaatay 71 Mudane, hal xildhibaan ayaa diiday halka Mudane kalena uu ka aamusay. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Madaxweynaha Puntland oo kulan la yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sare
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay xarunta Madaxtooyada ku qaabilay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee DFS Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan xubno wafdigiisa ka mid ah. Mas’uuliyiinta ayaa iska wareystay xaaladdaha dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo shaqooyinka Aqalka Sare. Xildhibaanno ka kamid ah xubnaha lagu casuumay madasha ayaa Kalfadhi u sheegay in Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka ay suura-gal tahay in ay yeshaan kulan foolka fool ah, si ay uga wadda-hadlaan arrimaha khilaafka dhexdooda ah.